Japana: Tantaran’ny “Gypsy” Nokleary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2011 19:23 GMT
Vakio amin'ny teny 한국어, Français, Italiano, Español, English
Talohan'ny nampibaribarian'ny lozan'i Fukushima ny toetra manaitran'ny indostria nokleary Japoney, efa taona maro izao no nanao asa anaty fotoana fohy tao anatin'io toby io ireo mpiasa an-tselika nefa tsy nahalala akory ny risika amin'ny asany.
Takeshi Kawakami (川上武志) dia iray amin'ireo antsoina hoe (gypsy) mpandehandeha nokleary ary tahaka ireo mpiara-miasa aminy maro, izay efa 30 taona izao no nanaovany asa fivelomana tany amin'ireo toby noklearin'ny firenena mandritra ny fotoana fohy. Efa an-taona maro izay no nahazoany vola amin'ny fanampiana ny fanamboarana na fanoloana ireo ampahany tsy miasa tsara amin'ireo toby nokleary sy ny fanaraha-maso ireo raharaha mety hampidi-doza noho ny fisian'ny risika fivoahan'ny taratra mahery vaika.
Anatin'ny bilaoginy, nampahafantatra ny kolikoly sy ny fanaovana fifanarahana miafina nisy teo amin'ny governemanta sy ny indostria nokleary i Kawakami, mampifantoka ny fandrakofany ao amin'ny toby noklearin'i Hamaoka. Vao haingana io toby nokleary io no nakatona noho ny fangatahan'ny governemanta Japoney noho ny fanaovana asa fanamboarana taorian'ny fiheverana hoe mampidi-doza ny fanohizana ny fanaovan-draharaha anaty taratra nefa izy dia ao anatin'ny faritr'ireo tany lalovan'ny triatra vokatry ny horohoron-tany any amin'ireo nosy Japoney.
Ao amin'ilay lahatsoratra izay voadika amin'ny ampahany eto, milaza ny zava-niainany amin'ny maha-mpiasa an-tselika azy izy rehefa niasa voalohany indrindra tao anatina mpamokatra enton-drano tao amin'ny Toby noklearin'i Genkai any atsimon'i Japana.
Toby noklearin'i Hamaoka, sarin'i Hiroaki Sakuma. CC BY-SA license.
Nadika eo ambany faneken'ny mpanoratra ity lahatsoratra manaraka ity:
Efa mihoatra kely ny 5 taona aho no niasa tao amin'ny Toby noklearin'i Hamaoka, nefa tsy voalohany izao no niasako tanatina Toby nokleary. Talohan'i Hamaoka, nandany ny faha-30 taonako niasa tanatina toby nokleary teo amin'ny manodidina ihany aho nandritra ny 10 taona teo ho eo tamin'ny taona 1980. Tamin'izany fotoana izany, tsy niasa tanatina toerana iray monja aho fa nifindrafindra tamina toby maro mba hanao asa fikojakojana mitohy. Tato ho ato, izany sokajin'olona izany dia antsoina hoe “mpifindrafindra toerana (gypsy) nokleary” miaraka amina somary fanambaniana kely ary tamin'izany vanim-potoana izany aho dia niaina tahaka ny iray amin'ireo.
Roa taona taorian'ny nanombohako ny fiainana mirenirenin'ny mpifindrafindra toerana, Voalohany indrindra no nidirako tao anatin'ny fon'ny mpamokatra entona. Tamin'izany fotoana izany aho dia niasa tao anatin'ny Foibe Noklearin'i Genkai tany amin'ny Prefektioran'i Saga aho. [Fanamarihan'ny mpamoaka: Raha tsorina, misy tranobe fitahirizana ao anatin'ilay foibe. Io tranobe io no fon'ny toby nokleary sy misy ny mpamokatra entona.] ……Ny fony dia ampahany amin'ny vondrom-pihary izay amotehana ny uranium nokleary. Mamokatra hafanana ka avy eo dia lasa any amin'ny Mpamokatra entona izay mamokatra ny entona mba hamatsiana angovo ireo turbines izay manodina ireo mpamokatra any amin'ny toeran-kafa ao anatin'ny foibe nokleary . Raha ampitahana dia mbola avo lavitra noho ny an'ireo hafa [ao anatin'ny foibe] ny haavon'ny fielezan'ny taratra ao anatin'ilay tranobe fitahirizana. Ny anjara asako dia ny miditra ao anatin'ny [mpamokatra] ary mametraka robot mpanara-maso izay afaka manara-maso raha misy fahasimbana ao anatin'ny mpamokatra entona…...
Ny zava-nitranga marina tamin'iny andro iny dia nisy olona nisolo ahy ary niditra tao anatin'ny mpamokatra entona mba hametraka ilay robot. Taorian'ny fahavitan'ny fametrahana, nisy olana satria dia tsy nety namaly ilay robot ary tsy afaka nobaikoana avy aty ivelany. Nisy loaka kely be dia be tamin'ny rindrin'ny foiben'ny mpamokatra entona ary ireo “tongotra” enin'ilay robot (enina izy ireo raha tsy diso aho), nampiasaina avy amin'ny alalan'ny fibaikoana alavitra, dia tokony ho afaka nanaraha-maso izany avy amin'ny alalan'ireo loadoaka ireo. Ireo mpiasa tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fametrahana dia nihevitra araka izany fa nisy olana ny fametrahana araka ny tokony ho izy ny tongotr'ilay robot.
Raha tsy mipetaka tsara ireo ‘tongotra’ ka avela amin'izany toerana izany ilay robot, dia mety hijanona tsy handeha amin'ny fotoana rehetra izany. Raha izany no mitranga, midika fahaverezana milina manana fahamarinana avo (de precision) izany, izay voalaza fa mitentina eo amin'ny yen zato tapitrisa maro eo. Izany no nahatonga ahy nalefa niditra tany anatin'ilay mpamokatra, tsy nanam-potoana hiomanako akory, mba hamerina ilay robot amin'ny toerana mety hampiasaina azy talohan'ny nitrangan'ny loza. Nanomboka nanao ny fitaovana sy akanjo ilaiko aho hidirako ao anatin'ilay trano, teo amina toerana manakaiky ilay mpamokatra entona. Nisy mpiara-miasa amiko roa nanampy ahy niakanjo. Efa nanao akanjo roa sosona aho, ary teo ambonin'izany, nanao akanjo fiarovana Tyvek izay vita avy amin'ny taratasy sy vinyl, ary nanao saron-tava misy rivotra alefa aminà fantsona aho. Ho fanampin'izay, nanarona ny tendako, ireo hato-tanako sy ny kitrokeliko tamin'ny vinyl maro aho mba tsy hisy na dia fisokafana bitika aza.
Vao vita ny fanaovako ilay akanjo fiarovana — izay raha tsorina dia ohatra ny akanjona mpoandeha sambondanitra— nizotra nankany amin'ilay tranobe aho. Rehefa tonga tany amin'ny faritr'ilay tranobe aho, nisy mpiasa roa niandry. Mpiasa anatina orisana iray antsoina hoe Japanese Society for Non-Destructive Inspection [JSNDI] izy ireo ary, ny nahatalanjona ahy, na dia avo dia avo aza ny fielezan'ny taratra ao amin'io faritra io, tsy niakanjo afa- tsy ny akanjo fiasana tsotra izy ireo. Tsy nanao saron-tava akory izy ireo. Nanasa ahy ilay olona tompon'andraikitra ary, taorian'ny nandinihany ny masoko tanatin'ilay saron-tava, dia nanondrika ny lohany nandritry ny fotoana fohy. Heveriko fa ny fandinihany ny masoko fotsiny ihany dia efa nahafahany hamantatra fa afaka miasa ao anatin'ilay fony aho.
Niaraka nankany amin'ny mpamokatra entona izahay. Izay no nahitako maso ny mpamokatra entona voalohany indrindra. Boribory na somary lavalava ny bikany, mety eo amin'ny 3 ny savaivony (mety tsy tadidiko tsara ny habeny), ary nipetraka tamina toerana mbola avo noho ilay makarakara nitsangananay. Ny fototr'ilay mpamokatra entona dia toa nahatakatra ny soroko, teo amin'ny latsaky ny 1.5m teo. Any amin'ny farany, nisy zohindriaka. Nivoha izy io, ary tonga dia fantatro fa tsy maintsy hiditra ao anatiny aho.
Nalefany manodidina ahy ny tanan'ilay tompon'andraikitra avy amin'ny JSNDI ary niara-nanatona ny zohindriaka izahay. Nanatona ny sisiny izahay ary nijery ny tao anatiny. Maizina tao anatiny, ary mavesatra sy tsy azo iainana ny rivotra. Tahaka ny nisy zavatra mampiahiahy niaina ao anatiny. Lasa matroka ny endriko. Nisy fahatsapana tahotra nisoko miadana tato amiko. Raha nanakaiky ny zohindriaka aho, nahamarika fimonomononana tanatin'ny sofiko sy nahatsapa ho niahotra aho hiditra ao anatiny. Rehefa nijery tao anatiny aho, hitako fa nifatotra tamin'ilay rindrina natoron'ilay mpiasan'ny [JSNDI] ilay robot. Tsy nifatotra tsara izany, izay no nahatonga ny fandefasana ahy tany. Nampihorohoro ny tontolo tao anatiny ary tsy maintsy niady tamin'ny faniriako hitsoaka aho. Mety tsy te-hiditra tao anatiny aho, nefa tsy afaka nandà.
Nanana bika efamira ilay robot, 40 cm isaky ny lafiny ary 20 cm ny hateviny. Nantsoina hoe ‘robot hàla’ izany. nanatohaka ny tarehiny tamin'ny sisin'ny zohindriaka ilay mpiasan'ny JSNDI, ny ampahatelon'ny tarehiny dia ntodika tany anatiny, ary nanazava tamim-pahatoniana tamiko ny zavatra tokony hataoko. Nisy fahamalinana kely tamin'izany fotoana izany ny amin'ny loza ateraky ny fielezan'ny taratra ho an'ireo mpiasa, nefa na izany aza dia lasa saina tamin'ny hetsika feno faharisihan'ilay mpiasa, izay nijery tao anatin'ilay tranobe niaraka tamiko aho.
Nanohy nijery tao anatiny izy, tsy tqitrq qkory, ary tadidiko ho nanontany tena aho hoe maninona izy no tsy natahotra. Izaho efa saika rakotra tanteraka raha izy kosa tsy nanao na dia saron-tava fotsiny ihany aza. […]
Taorian'ny nahazoako ny fanazavana amin'ny antsipiriany ny asa tsy maintsy ataoko ao anatiny, tonga ny fotoana andehanana. nanatona ny zohindriaka teo akaikina tohatra miankina izay nentina tany aho, ary nanao famantarana tamin'ny loha taty amiko ilay mpiasan'ny JSNDI. Nitsangana aho, nianika ilay tohatra, ary nanosika ny vatako ambony miankina amin'ilay zohindriaka. Tamin'izany segondra izany indrindra, nisy zavatra nitazona ny lohako ary nanery mafy ny lohako. Tonga dia nigobona ny sofoko avy eo. Miady amin'ny tahotra, nametraka ireo tanako tamin'ny sisin'ilay zohindriaka aho ary nampiasa ny elanelana mba hanosehiko ny vatako rehetra any anatiny. Mbola nitombo ihany ilay feo migobona.
Nisy mpiasa iray niteny fa vantany vao nitsofoka ny toby nokleary izy dia naheno feo tahaka ny drakaka mikisakisaka. “zawa,zawa,zawa…” Niteny izy fa mbola henony ihany izany feo izany taorian'ny nahavitany ny asa. Na taorian'ny asa fanaraha-maso aza, rehefa niverina tany an-tranony izy, tsy mbola afaka tao an-tsofiny ilay feo. Niafara tamin'ny fahakiviany izany. Ny mpanoratra iray izay naheno ity tantara ity dia niresaka tamin'io lehilahy io ary nanoratra asa soratra feno mistery momba ny zava-niainany. Ny lohatenin'ilay boky dia “The Crab of the Nuclear Reactor” (Ny drakaky ny toby nokleary). Nivoaka tamin'ny taona 1981 ary nalaza dia nalaza teo aminay.
Raha ny momba ahy, tsy mbola naheno feo tahaka ny drakaka aho fa nahatsapa fa voatery mafy ny lohako ary naheno lalina tany anatin'ny sofiko, ako maranitra tahaka ny sutra “gan, gan, gan”. Rehefa niditra ny mpamokatra entona aho dia nitsangana tampoka ary nikasoka ny valindrihana ny arolohako. Noho izany dia tsy maintsy niforitra aho ary nitazona ny sandry ankiroan'ilay robot tanatin'ny efitra maizina. “OK” hoy aho nihiaka. Tsy voabahana intsony ilay robot ary nivoaka ny lavaka ny tongony. Tsy dia mavesatra noho izay noeritreretiko ilay robot. Taorian'ny nametrahako tamin'ny laoniny ireo tongony tao anatin'ireo lavaka dia niteny OK indray aho ary nipetraka tao anatin'ilay lavaka izy araka izany. Tanatin'ny aizina, rehefa namerina nijery aho raha tafapetraka tao anatin'ireo lavaka daholo ny tongony dia nanao OK indray aho ary nivoaka ny zohindriaka. […]
[Vantany vao tafavoaka,] Mbola somary tohina kely ihany aho nefa nijery ny fitaovam-pandrefesana ary nahita fa nanamarika 180 izany, raha 200 kosa ny sanda lehibe indrindra afaka tahiriziny. Tanatina 15 segondra monja, nilona tamina taratra avo dia avo aho, 180 millirem. Tamin'izany fotoana izany dia nampiasaina ny mari-drefy ‘millirem’ raha hafa kosa izany ankehitriny. Ankehitriny dia mampiasa ny sievert avokoa ny olon-drehetra. Tamin'ity fotoana ity dia niandraikitra ny asa fanaraha-maso izay naharitra teo amin'ny 1 volana teo aho. Taorian'izay dia niasa tanatina toby nokleary iray hafa aho nefa fanindroany izao fa mbola tsy afaka tato amiko ny tahotra ary mbola niatrika indray ilay feo mampatahotra.
Isaorana i Tomoko Tsuchiya sy Chris Salzberg tamin'ny fanampian'izy ireo tamin'ity lahatsoratra ity.